Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo dagaaladii ugu dambeeyay faafaahintooda
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo dagaaladii ugu dambeeyay faafaahintooda
Wararkii ugu dambeeyay ee nagasoo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya faahfaahinta dagaalo badan oo kamid ah dagaalada joogtada ah ee gumaysiga Wayaanaha lagaga xoraynayo dhulka Ogadenia. Dagaaladan ugu danbeeyay bakhtiga cadawga ee la isdultaagay waa 32 askari iyo dhaawac intaa ka badan. Dagaalada ayaa qaarkood aan laga helin faafaahinta khasaaraha cadawga la gaadhsiiyay. Dagaaladaa ayaa u dhacay sidan.
10/10/13 Balicarab oo dagmada Fiiq katirsan dagaal kudhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaana ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare xoogan oo aan faahfaahin lagahaynin.
12/10/13 Bafayow oo dagmada Baabili katirsan iyo Faaraxyo oo Caado udhaw dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 6 askari 10 kalana waa laga dhaawacay.
13/10/13 Goorgota oo Caado katirsan iyo Calicarbeed oo Dhagaxbuur katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan.
14/10/13 kalaalka oo Duduma-cadka udhaw dagaal kulul oo kudhaxmaray ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia iyo ciidanka wayaanaha waxaana cashir farwaawayn loogu dhigay ciidanka cadawga oo halkaas lagaga dilay inta lahubo 9 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/10/13 Xamaro oo Garbo katirsan iyo Reermawaaye oo Caado udhaw iyo Calixijaab oo Baabili katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 8 kalana waa laga dhaawacay.
16/10/13 Tuulawacdi oo Wardheer katirsan iyo Hadawayne oo Dhuxun katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubo 3 askari 6 kalana waa laga dhaawacay.
17/10/13 Jeerinle oo Bulaale udhaw waxaa ciidamada wayanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
18/10/13 Garbo’araha oo Dhuxun udhaw iyo Fiidoole oo Iimaybari katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/10/13 Goorgoos oo Caado udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/10/13 Hoola oo qabribayax katirsan weerar culus oo ay cwxo kuqaadeen kuwa gumaysiga oo deegaankaas dadka kudhibayay waayna halkaas ku gaadhsiiyeen khasaare aad ubadan oo aan wali faahfaahintiisa lasoo dhamaystirin.
21/10/13 Gaagumo oo dagmada Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.